Azon'ny alikako ve ny dikan'ny teny hoe Eny sy tsia? | Alika Manerantany
Azon'ny alikako ve ny dikan'ny teny hoe Eny sy tsia?
Mahita olona isan'andro aho miteny tsia amin'ny alikany. Ary mivazavaza aminy. Hoy ry zareo TSIA! ary tezitra izy ireo satria tsy takatry ny alika. Amiko dia zavatra misarika ny saiko manokana izany, satria amin'ny lafiny iray tsy hitako misy miteny hoe ENY! miaraka amin'ny fanamafisana mitovy. Toa liana be amiko izany, farafaharatsiny.
Ny fananana alika dia midika hoe manana andraikitra ny hikarakara azy io sy hitarika azy, ary izany dia mitaky ny fanabeazana azy. Mazava ho antsika rehetra izany. Ny tsy mazava amin'ny rehetra dia ny hoe, na iza na iza, raha tsy misy fiofanana, dia afaka mampiofana alika tsara. Ao amin'ny lahatsoratro androany, miresaka momba an'io mazava tsara aho: Azon'ny alikako ve ny dikan'ny teny hoe Eny sy tsia? Tongava ary hamaky ...
Voalohany indrindra, mamporisika anao aho hamaky lahatsoratra teo aloha, mba hahafantarako bebe kokoa ny hafatra tiako halefa aminao amin'ity iray misy antsika ity. Ireo fidirana ireo dia ho ohatra, Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina ateraky ny olombelona o Fampianarana ambaratonga ara-pientanam-po: Ny adin-tsaina mahatonga ny olombelona II.
Voalohany indrindra, Tokony ho takatrao fa ny foto-kevitra sy ny dikan'ireo teny hoe ENY sy TSIA dia olombelona tanteraka. Alika, hatramin'ny nahaterahany, dia tsy azo atao mihitsy ny mahatakatra azy ireo, raha tsy nianatra momba izany izy, ary miala tsiny aho milaza fa satria avoakany mafy ilay izy, dia tsy mila mahazo an'io izy. Mora sy tsotra io.
Misy olona milaza amiko: Eny, mihiaka mafy aho fa TSIA! matanjaka aho ary misintona azy amin'ny fehikibo aho ary tsy manao azy intsony. Ary hoy aho tamin'ireto olona ireto: Tsy manana olana amin'ny alika ianareo, ianareo no olan'ny alika. Mazava be.
Raha tany Rosia ianao, ary nisy Rosiana tonga ka nilaza taminao hoe:
Eny, zavatra mitovy amin'izany no mitranga amin'ny alika rehefa ny namany, ilay torolàlana maha-olombelona azy, no maneso ny fehikibony ary mikiakiaka aminy, tsy fantany izay antony. Tsy mametraka fetra na zavatra hafa toa izany. Tsy fantatra izay atao, vanim-potoana.
Raha te hampianatra azy ny dikan'ny teny hoe ENY sy ny teny TSIA ianao dia mankanesa any amin'ny matihanina iray ao amin'ny faritra misy anao, na Mpanabe na Mpanazatra, hampianatra ny fitaovan'ny Fankatoavana amin'ny namanao (miabo tsara foana, azafady), ary ao anatin'io fitaovana io no ampidiro azy.
Miarahaba sy mikarakara ny biby fiompinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Azon'ny alikako ve ny dikan'ny teny hoe Eny sy tsia?
Fahaizana, fanatanjahan-tena ary fianarana ho an'ny biby fiompinao
Ny tantaran'ny Boxer